eHimalaya Online || News from nepal » चर्चित नायक पल शाह कसरी यति धेरै चर्चित बने।पूरा पढ्नुहोस.
चर्चित नायक पल शाह कसरी यति धेरै चर्चित बने।पूरा पढ्नुहोस.
२०७७ असोज १६ गते शुक्रबार ०५:१०
कम उमेरमै स्टार बनेका पल को हुन् र कहिले बाट बने चर्चित ? हामीले छोटकरीमा पललाई नजिकबाट नियालेका छौं । स्थायी घर दाङ भएका पलको वास्तविक नाम पूर्णविक्रम शाह हो पल मोडल या फिल्मको हिरो थिएनन् । आर्मी बन्ने सपना बुनेका पल भिडियो ‘एडिटर’...
कम उमेरमै स्टार बनेका पल को हुन् र कहिले बाट बने चर्चित ? हामीले छोटकरीमा पललाई नजिकबाट नियालेका छौं । स्थायी घर दाङ भएका पलको वास्तविक नाम पूर्णविक्रम शाह हो पल मोडल या फिल्मको हिरो थिएनन् । आर्मी बन्ने सपना बुनेका पल भिडियो ‘एडिटर’ थिए । तराई टेलिभिजनमा म्युजिक भिडियो र भिडियो कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्दा गर्दै पल बनेर पूर्ण मोडल भए । सुनिल गिरीको गीत ‘को होला त्यो’ भिडियोमा मोडलिङ गरेपछि पल रातारात स्टार बने । ‘हनी बनी’ रिलिज पछि पलको डिमाण्ड चुलियो । उनले २०० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
म्युजिक भिडियोका स्टार पल डेव्यु फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट नै लाइमलाइटमा आएका हुन् । दोश्रो फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ले सोही सफलतालाई पछ्यायो । तेश्रो फिल्म ‘जोनी जेन्टलम्यान’ त्यति साह्रो चलेन । पलको चौथो फिल्म ‘शत्रुगते’ रजतपटमा सफल रह्यो । हालै उनले ‘विर विक्रम–२’ को छायाकंन सकाएका छन भने ‘हृदयभरी’ फिल्मको छायाकंनको तयारीमा रहेका छन् । फिल्म भन्दा बढि म्युजिक भिडियोबाट दर्शकको नजरमा पर्न सफल भएका छन।
प्रकाशित मिति २०७७ असोज १६ गते शुक्रबार ०५:१०